किन क्षेत्र बिक्री र मार्केटिंग परम्परागत सीआरएम पछाडि हेर्नु पर्छ Martech Zone
विश्वको टेक्नोलोजी - सोशल मिडिया, भिडियो च्याट गर्ने, आदिको विसर्जनको साथ तीव्रताका साथ एक अवसरले आफूलाई धेरै वास्तविक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एक अवधारणा जुन एक पटक प्राकृतिक, सहज र एक धेरै पछि अस्तित्व मा अवस्थित थियो एक असुविधा, अधिक महँगो समय उपभोक्ता अनुकूलन गर्न relegated गरिएको छ। शारीरिक रूपमा व्यक्तिहरूको अगाडि तपाईसँग सम्बन्धहरू बनाउन चाहानुहुन्छ। यो एक जटिल स्पष्ट धारणा जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता यो छ कि हाम्रो समाज सुविधाको नाममा कम सञ्चारको कम व्यक्तिगत रूपहरूमा सारिएको छ।
हामी यो सामाजिक संक्रमणको बारेमा कस्तो महसुस गर्छौं भन्ने कुरा औंल्याउँदैन। यस टुक्रामा मेरो उद्देश्य छ कि यो नयाँ वास्तविकताले कसरी बिक्रीको कार्यमा प्रभाव पार्‍यो र बिक्री उपकरणहरूको उपयोगमा छ भन्ने छ। स्पष्ट रूपमा बिक्री बिक्री पेशेवरहरूले वास्तवमा अवसरहरूको फाइदा लिन सक्दछन् जुन डिजिटल बिक्री र मार्केटिंग रणनीतिबाट बढेको आवाश्यकताको साथसाथै व्यवसायको आन्तरिक बिक्री गतिविधिहरूमा निर्भरता बढेको छ।
डेस्कको पछाडिबाट प्राप्त र वास्तवमा एक सम्भावित संग सम्पर्क बनाउनु प्याक बाट एक बिक्री प्रतिनिधि फरक को एक सजिलो तरीका हो। यसले उनीहरूसँग सम्पर्क राख्ने र उनीहरूले प्रदान गरेको उत्पादन वा सेवा किन्नको लागि सम्भावित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यदि यो सत्य हो भने, त्यसोभए के सहि पनि विचार हो कि उनीहरूलाई उचित समर्थन र जानकारीको आवश्यक छ ताकि फिल्डमा बाहिर हुँदा ठीकसँग कार्यान्वयन गर्न। समर्थन सक्षम गर्ने उपकरणहरू बिक्री सक्षम उपकरण र टेक्नोलोजी एक राम्रो उदाहरण हो।
मैले दुबै भित्र र बाहिरी बिक्री भूमिकाहरूमा व्यापक रूपमा काम गरें। प्रत्येक प्रकार्यको कार्यप्रवाह अद्वितीय चरसँग प्रदर्शन आउटपुटलाई प्रभाव पार्नेसँग पूर्ण भिन्न हुन्छ। भित्री बिक्री प्रतिनिधि को रूपमा, म मेरो क्यूबिकल, वा अफिसमा बसें, र ईमेल पठाउँदा र प्रतिक्रिया दिनको बीचमा सबै दिन फोन कल गरें। व्यापार प्रस्ताव, रिपोर्टहरू भर्न र मेरो ग्राहक टचपोइन्ट्स कम्पनीमा सीआरएममा कागजात बनाउनु पनि दिन प्रतिदिनको एक हिस्सा थियो। बाहिरी प्रतिनिधिको रूपमा, मैले यी चीजहरू गर्नु पर्दछ व्यक्तिगत र व्यक्तिगत भ्रमणको बेला प्राय: सवारीमा बसिरहेको बेला। म धेरै भाग्यशाली थिएँ यदि मैले यसलाई छिटो ट्राफिकको माध्यमबाट बनाएँ (जुन ह्युस्टनमा अक्सर हुँदैन)। मौसमको साथ दिनको समय जस्तो कारकहरू निश्चित रूपले निर्धारण गर्छन् यदि एक कम्युट तनावपूर्ण हुनेछ वा हुँदैन। यदि मैले मेरो ग्राहकहरूको कुनै एक खातामा घटना राख्दैछु भने स्थानमा हुँदा परिणामहरू (मात्रात्मक र गुणात्मक) क्याप्चरको लागि म जिम्मेदार थिएँ। लामो कहानी छोटो - बाहिरी बिक्री व्यक्तिको रूपमा मेरो दिन-प्रतिदिन भूमिकामा अधिक कारकहरू सामेल थिए, र यसैले सफलताको लागि सम्भावनाहरूलाई असर गर्ने अधिक चरहरू।
प्रबन्धकीय पक्षबाट, म time० बिक्री प्रतिनिधिहरू माथि एकै पटक मा व्यवस्थित गरेको छु जो एक दिन मा अनियमित समयमा उनीहरूको बिभिन्न बजारहरुमा बिक्री आपरेशनमा सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका थिए। यी प्रतिनिधिहरू देशका विभिन्न भागहरूमा टाढाका रूपमा काम गर्दा, हामी भित्र प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका थियौं बजारहरूको व्यक्तित्वको बारेमा मूल्यवान अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्ने, बुझ्ने र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँ जटिलता थियो। यस जानकारी बिना, यो अनुकूलित क्षेत्र रणनीति क्षेत्र रणनीति ड्राइभ गर्न धेरै धेरै गाह्रो थियो।
एक पारम्परिक सीआरएमको साथ समस्याहरू
उपलब्ध बिक्री उपकरणहरू मुख्य रूपमा भित्री बिक्री भूमिकाको लागि निर्मित छन्। परम्परागत CRM सँग एक ईन्टरफेस छ कि फोन कलहरू गर्ने र ईमेलहरू पठाउनको दिन प्रति दिनको साथ राम्रो प al्क्तिबद्ध गर्दछ। तिनीहरू बाहिरका बिक्री प्रतिनिधिहरूको लागि अक्षम छन् जो जानुहुन्छ र जहिले पनि डेस्कटप वा वाइफाइमा पहुँच गर्दैन।
बाहिरको बिक्री र क्षेत्र मार्केटि teams टोलीहरूलाई उपकरणहरू चाहिन्छ जुन तिनीहरूको अद्वितीय दैनिक कार्यप्रवाह समर्थन गर्नका लागि निर्मित हुन्छ। अन-द गो बिक्री गतिविधिमा समर्पित मोबाइल क्षेत्र बिक्री अनुप्रयोगले व्यवसायलाई डाटा प्राप्त गर्न र केन्द्रीकृत गर्न, फिल्ड अपरेशनहरूलाई मापदण्डिकरण गर्न, सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, रिप्सलाई उत्तरदायी राख्ने र उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्दछ।
बाहिरका प्रतिनिधिहरूले टेक्नोलोजी कसरी उठाउन सक्छन्
उल्लेख गरिए अनुसार, बाहिरका प्रतिनिधि नियमित यात्रा गर्दछन्, आमने-सामने बैठकहरू छन् र तिनीहरूको दिन भर अनियमित घटनाहरूको सामना गरिन्छ। उदाहरण को लागी, खराब मौसम को स्थिति, ट्राफिक जाम, र गतिविधि को समय दिन को क्षेत्र फिर्ता प्रतिनिधि को लागी प्रभाव पार्न सक्छ, र विस्तार द्वारा उसको प्रदर्शन। यही कारणले गर्दा परम्परागत CRM बाहिरका गतिविधिहरू मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीहरूको आवश्यकतालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्दैन। रिप्सलाई एक टेक समाधान आवश्यक पर्दछ बारहिनहरूलाई सम्बोधन गर्न जुन उनीहरूको कार्यप्रवाह अद्वितीय बनाउँदछ।
त्यहाँ धेरै तरीकाका क्षेत्र प्रतिनिधिहरूले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर प्रदर्शन सुधार गर्न सक्दछन्, यहाँ चार उदाहरणहरू छन्।
दिनको योजना बनाउनु फिल्ड रिपको सफलताको लागि आधारभूत हुन्छ। विगतमा, धेरै जना बिहान ओछ्यानबाट बाहिर उफ्रिए र तिनीहरू त्यस दिन कुन स्थानहरूमा यात्रा गर्ने निर्णय गर्दछन्। स्पष्ट रूपमा, यो सम्भावित वा चालू खाताहरूको भ्रमण गर्ने बेलामा बढी सोचविचार गर्नु राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म, यो सँधै सम्भाव्य हुँदैन उपकरणको आधारमा जुन प्रतिनिधिलाई प्रदान गरिन्छ - सरल, सहज ज्ञान युक्त टेक इन्टरफेसहरू यहाँ आवश्यक छन्। तिनीहरूले प्रतिनिधिहरूलाई सजिलैसँग आफ्नो क्यालेन्डरहरू योजना गर्नको लागि समय लिनको लागि केही हप्ताको लागि एक महिनाको लागि अग्रिममा उनीहरू इच्छुक छन्।
यसले उनीहरूलाई रोक्छ र तिनीहरूको क्षेत्रका प्रत्येक ग्राहकको बारेमा सोच्न मद्दत गर्दछ र उनीहरूलाई रणनीतिक रूपमा सोच्न मद्दत गर्दछ। यसका अतिरिक्त तपाईले आफ्नो क्षेत्र लाईभ नक्शामा हेर्न सक्नुहुन्छaमार्फत क्षेत्र बिक्री अनुप्रयोग र विन्डशील्ड समय र यात्रा समय काट्नुहोस्। कम समय तिनीहरू यात्रा गर्दै छन्, अधिक समय प्रतिनिधिहरू सम्झौताहरू बन्द गर्न र ग्राहकहरूको देखभाल हुन सक्छ।
२. खाता डाटा
प्रतिनिधिहरूसँग उनीहरूको पहुँच र व्यवस्थित गर्न आवश्यक डाटाको अधिकता हुन्छ। जब तपाईं बिक्री भित्र काम गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग नोटहरूमा पछाडि फर्काउन कल एक सीआरएम ड्यासबोर्ड तान्ने लक्जरी छ। एक क्षेत्र प्रतिनिधि सबै समय मा लाभ छैन। तिनीहरू दि गो मा खाता इतिहास सम्बन्धित कुञ्जी जानकारी पहुँच गर्न सक्षम हुनु पर्छ। तिनीहरू पनि एक कुशल तरीकामा एक स्टप पछि खाता जानकारी अपडेट गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। खाता डेटामा मोबाइल पहुँच प्रदान गर्न रिप्सलाई मद्दत गर्दछ।
Data. डाटा विश्लेषण गर्नुहोस्
अब जब तपाईंसँग डेटा छ, तपाईंले यससँग केही गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं अपरेसनहरू, लक्षित बजारहरू, र ग्राहकहरूको वरिपरि डाटा विश्लेषण गर्नुहुन्न भने तपाईं प्रतिस्पर्धा पछाडि जान लाग्नुहुनेछ। यो बिक्री नम्बरहरू हेर्दा मात्र हो। यसको मतलब तपाईले के गरिरहनु भएको छ कि काम गरिरहेको छ वा छैन भनेर जाँच गर्नु हो। आजको टेक्नोलोजीको साथ, एक प्रतिनिधि कम्पनी भित्र कोही अरूमाथि भरोसा गर्नुपर्दैन उनीहरूको डेटा हेर्न र यसलाई पुनः संवाद गर्न। आजको उपलब्ध टेक्नोलोजीको साथ, धेरै विश्लेषणात्मक प्रक्रियाहरू अब स्वत: स्वचालित भइरहेका छन्, जसले बिक्री कर्मीहरूलाई आफैंमा डाटा विश्लेषणमा लगानी गर्न अनुमति दिन्छ।
बाहिरका बिक्री टोलीहरूको लागि ठूलो चुनौती भनेको उनीहरू एक अर्काबाट टाढा रहनु हो। यसले ज्ञान स्थानान्तरण सीमित गर्दछ जुन सँगै काम गर्ने टोलीहरूबाट हुन सक्छ। त्यो ज्ञान स्थानान्तरण बिना, प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सहकर्मीहरूको गल्ती दोहोर्याउन बढी सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ सहकर्मीहरूसँग नियमित रूपमा कुराकानी गर्न धेरै लाभहरू छन् जस्तै उत्तम अभ्यासहरू साझा गर्ने, विकासशील मित्रैलो र मैत्री प्रतियोगिताको विकास। उपकरणहरू प्रयोग गर्नका लागि संवाद गर्न र अन्य प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्यको लागि बृद्धि गर्नको लागि उत्तम तरिका हो।
बिक्री प्रबन्धकहरूले टेक्नोलोजी कसरी प्रयोग गर्न सक्दछन्
एक उच्च गुणवत्ता क्षेत्र बिक्री अनुप्रयोग केवल रिप को लागी होईन। केहि उदाहरणहरुमा, यो बिक्री ब्यवस्थापकहरु लाई अधिक मूल्यवान हुन सक्छ। हाम्रो अन्वेषण अनुसार, कम्तिमा पनि manage०% बिक्री प्रबन्धकहरू उनीहरूको प्रतिनिधिमण्डलका गतिविधिहरूमा थोरै अन्तर्दृष्टिमा चिन्ता गर्दछन्। तिनीहरूसँग प्रत्येक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व के गर्दैछ भनेर जान्नु गाह्रो काम छ, विभिन्न बजार प्रवृत्तिहरू र विभिन्न भ्यारीएबलहरू राख्दै रेपको वर्क डेमा असर गर्ने। तिनीहरूसँग यति धेरै डाटा हुन्छन् कि सब भन्दा ठूलो आरओआईको लागि उत्तम समय र स्रोतहरू बाँच्नको लागि तिनीहरूलाई क्याप्चर गर्नुपर्दछ। यहाँ केहि प्रमुख तरिकाहरू छन् जुन बिक्री प्रदायकले टेक्नोलोजी लिन सक्दछन्।
डाटाबेस राख्नुहोस् - ग्राहकको साथ प्रत्येक ऐतिहासिक टचपोइन्टको रेकर्ड राख्नु कुनै पनि प्रकारको बिक्रीको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो क्षेत्र बिक्री मा गाह्रो साबित गर्न सक्दछ किनकि यो अनियमित ठाउँमा कार्यालय बाट टाढा भइरहेको छ। प्रतिनिधिहरूको लागि एक उपकरण भएको उनीहरूले रोक्नको लागि तिनीहरू कति लामो स्टपमा छन् रेकर्ड गर्न र त्यहाँ के गरियो व्यवस्थापकहरूलाई प्रत्येक खाता स्थिति-अनुसारको ठाउँमा राम्रोसँग बुझ्नको लागि अनुमति दिन्छ।
गुण जाँच - प्रबन्धकहरू र प्रतिनिधिहरू सँधै स्वतन्त्रता र जवाफदेहीताको बीचमा सम्झौताको खोजीमा हुन्छन्। क्षेत्र बिक्रीमा, प्रबन्धकहरू एक रिप को गतिविधि को बारे मा चिन्ता हुन सक्छ किनकि उनीहरु लाई हर समय कार्य मा देख्न को लागी छैन। वेब र मोबाइल आधारित क्षेत्र बिक्री अनुप्रयोगले प्रतिनिधिहरू पूर्ण गर्नको लागि फारामहरू र प्रश्नावलीहरू प्रदान गर्न सक्दछ जब एक स्टपमा उनीहरूको गतिविधि ट्र्याक गर्न गैर-दखलमा मद्दत गर्ने व्यवस्थापकहरूसँग हुन सक्ने चिन्ताहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अपरेशनहरू मानकीकृत गर्नुहोस् - एक बिक्री प्रतिनिधि अक्सर कम्पनी को अनुहार हो। तपाईं निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ कि उनीहरू ब्राण्डको राम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। थप रूपमा, यदि तपाईं सम्पूर्ण रिमोट टोली व्यवस्थित गर्दै र ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं निश्चित हुन चाहनुहुन्छ कि ती सबै एउटै प्रक्रियामा पछ्याइरहेका छन्। फारामहरू र प्रश्नावली रिप्सले जवाफदेहिता र रिपोर्टि forको लागि भर्दछ, व्यवस्थापकहरूलाई उनीहरूको टोली भर मानकीकरण कार्यहरू पनि प्रदान गर्दछ।
पाइपलाइन दृश्य - प्रबन्धकलाई थाहा हुनु पर्छ कि पाइपलाइन भित्र कहाँ खाताहरू छन्। उनीहरूलाई संरचना चक्र, रेकर्ड र बिक्री चक्रको विभिन्न चरणहरू अनुगमन गर्ने क्षमता चाहिन्छ। एक उच्च गुणवत्ता क्षेत्र बिक्री अनुप्रयोगको साथ, प्रतिनिधिहरूले खाताहरूमा अपडेटहरू रेकर्ड गर्न सक्दछन् र प्रबन्धकहरूले ती अपडेटहरू देख्न सक्छन् र सम्भावित ग्राहकहरू पाइपलाइनमा हुने ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सक्छन्।
आउटफील्ड - क्षेत्र बिक्रीका लागि निर्मित एक उपकरण
आउटफील्ड आईफोन, एन्ड्रोइड र वेबको लागि अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्ने वेब र मोबाइल आधारित सीआरएम र क्षेत्र बिक्री अनुप्रयोग हो। प्लेटफर्मले 70० भन्दा बढी देशहरूमा बिक्री र मार्केटि teams टोलीको बाहिर सेवा गर्दछ। आउटफील्डले बिक्री प्रबन्धकहरू र फिल्ड प्रतिनिधिहरू सबैलाई मद्दत गर्दछ। फिल्ड ब्यवस्थापकहरूको लागि, यसले उनीहरूको बजारको बारेमा अन्तरदृष्टि पत्ता लगाउन, टोली गतिविधि ट्र्याक गर्न र प्रमाणित गर्न, र उपकरणहरू मार्फत संवाद गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू रिपोर्टि and आपूर्ति गर्छन् र एनालिटिक्स कम्पनीहरूले उनीहरूको क्षेत्र बिक्री र मार्केटिंग कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्छ। क्षेत्र प्रतिनिधिहरूको लागि, आउटफिल्डले उत्पादकता बढाउन, ड्राइभ राजस्व बढाउन र तिनीहरूको गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। मोबाइल अनुप्रयोगले जाँदा उनीहरूको क्षेत्र र खाताहरू प्रबन्ध गर्न एक सहज अन्तर्वार्ता प्रदान गर्दछ। एक प्रतिनिधि चाँडै भ्रमण गतिविधि सिर्जना गर्न, नोटहरू असाइनमेन्ट गर्न सक्नेछ, साथै खरीददारहरूको बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी कायम राख्न र पहुँच गर्न सक्दछ। आउटफील्डले प्रतिनिधिलाई सँगी फिल्ड रिप, व्यवस्थापन वा अन्य कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा रहन क्षमता दिन्छ।
आउटफील्ड क्षेत्र बिक्री टीम दिमागमा डिजाइन गरिएको छ। तिनीहरू क्षेत्र मार्केटिंग, टेरिटमेन्ट मैनेजमेन्ट, रुट प्लानिंग, मर्चेंडाइजिंग, बिक्री र खाता म्यापि and र फिल्ड बिक्रीको लागि समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
यहाँ आउटपुटले रेपहरूबाट उत्पादन बढाउन मद्दत पुर्‍याउने केहि उपकरणहरू छन्।
योजना क्यालेन्डर - आउटफिल्डले उनीहरूलाई व्यवस्थित राख्न समय भन्दा पहिले उनीहरूको भ्रमणको योजना बनाउन सहयोग गर्न रेपहरू वेब र मोबाइल क्यालेन्डर प्रदान गर्दछ। तिनीहरू क्यालेन्डरमा अनुस्मारकहरू सेटअप गर्न सक्दछन् केहि कामहरू गर्न रोक्न को लागी। यसले सुपरिवेजरहरूलाई के गर्छ भनेर लुपमा बस्न अनुमति दिँदछ।
मार्ग अनुकूलन - कम्युट अप्टिमाइजेसन अविश्वसनीय मूल्यवान छ। कुनै पनि प्रतिनिधिलाई थाहा छ कि विन्डशील्डको समय काट्नु भनेको खेल परिवर्तन गर्ने हो। आउटफिल्ड तपाईंको भ्रमणहरूलाई नक्शा दिनुहोस् र सोही अनुसार तपाईंको मल्टि-स्टप मार्गहरू निर्धारित गर्न मद्दत गर्नुहोस्। आउटफील्डले भविष्यवाणी गर्न र दुबै ऐतिहासिक डेटा र वास्तविक-समय घटनाहरूमा आधारित तपाईंको कम्युट अनुकूलित गर्न सक्दछ।
टीम गतिविधि - आउटफिल्ड मार्फत, तपाईं वास्तविक समयमा रिपहरू ट्र्याक राख्न सक्नुहुन्छ, एक अर्कासँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र प्रबन्धकहरूले प्रतिनिधि प्रशिक्षण दिन सक्छन्। टीमले समयमै जानकारी प्राप्त गर्ने टिमेटलाई सुनिश्चित गर्न अनुप्रयोगले सूचनाहरू पठाउँनेछ।
गेमिङ - Gamifai बिक्री प्रोत्साहन र ड्राइव मैत्री प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्न तपाईको बिक्री संचालन भित्र gamified सिद्धान्तहरु र अनुभव रोजगार को एक तरीका मात्र हो। आउटफील्डको प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको बिक्री अपरेशनहरू गेमिफाई गर्न अनुमति दिन्छ र यसरी कर्मचारीहरूको प्रदर्शनलाई बढावा दिन्छ।
पैलेडियम, एक hospice र palliative केयर प्रदायक, आउटफिल्ड तिनीहरूको बाहिरी बिक्री र मार्केटिंग प्रयास को लागी प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले यसलाई दिनको दिन र दीर्घकालीन दुवैमा सहयोगी पाउँदछन्। प्यालाडियमको व्यवसाय विकासका उपराष्ट्रपति रेमंड लुइसले आउटफिल्डको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको उनीहरूलाई तयार हुन मद्दत गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा जस्ता उद्योगको लागि, यो तपाईले वास्तविक निर्णय निर्माताको अगाडि छ महिना देखि एक वर्ष लिन सक्दछ।
आउटफील्ड मार्फत, प्यालाडियमले उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले बनाएका सबै टचपॉइन्टहरू ट्र्याक गर्न सक्षम छन् - तिनीहरू को हुन्, के भनियो, के प्रश्नहरू सोधे र अधिक। अन्तिम निर्णय निर्मातासँग भेट गर्ने समय आउँदा यसले तिनीहरूलाई अझ राम्रोसँग तयार हुन अनुमति दिन्छ। दिनहुँमा, प्यालाडियमले मार्ग अप्टिमाइजेसनको फाइदा लिन्छ। तिनीहरू नयाँ रेफरल स्रोतहरू नजिकबाट पहिचान गर्न सक्षम छन्, एक मार्ग योजना र यो आफ्नो मनपर्ने को नेभिगेसन प्रणाली संग कनेक्ट। यसले तिनीहरूको प्रतिनिधिहरू कुशलतापूर्वक काम गर्न अनुमति दिन्छ।
एक फिल्ड प्रतिनिधि लगातार यात्रा मा छ र तिनीहरूलाई एक उपकरण चाहिन्छ जुन छिटो, प्रयोग गर्न सजिलो छ र सजिलैसँग तिनीहरूसँग जान सक्छ। एक कम्प्युटर बाहिर प्राप्त गर्न, वाइफाइ र लग जानकारी को लागी कनेक्ट तपाइँको स्मार्टफोन बाहिर खींचने को रूप मा कुशल छैन र एक सहज अन्तर्वार्ता भित्र जानकारी इनपुट। एउटा संगठनलाई अन्तत: दुबै डेस्कटप पहुँच र मोबाइल पहुँच आवश्यक छ। मोबाइल समाधानहरू एक प्रतिनिधि को कार्यप्रवाह समर्थन गर्नका लागि हुन् जुन उनीहरू जानुहुन्छ। आउटफील्डले हाल विश्वभरि सयौं ग्राहकहरूको सेवा गर्दछ। तिनीहरूको शीर्ष ठाडोहरूमा सीपीजी, सीई र बीमा समावेश छ।
नि: शुल्क आउट आउटफिल्ड प्रयोग गर्नुहोस्
टैग: फिल्ड रिपक्षेत्र प्रतिनिधिक्षेत्र बिक्रीआउटफील्डआउटफील्ड अनुप्रयोगबिक्री प्रतिनिधिहरुबिक्री प्रतिनिधिहरू